Fikirka in ay sii daayeen aad LG phone smart jir ah oo u guuraan phone cusub Android? Telefoonada LG yihiin telefoonada caan ah, oo ay la yaqaan in ay sii wadaan habka saamiyada Android hawlgalka. Telefoonada Smart ka xeryaha LG ee lagu yaqaan ay style, tayada bandhigay af, camera, iyo hal-abuurka. Inta badan telefoonada waa telefoonada-dhamaadka sare iyo XSKK oo si bixiya khibrad dhamaadka sare.
Xogta beddelashada ka LG in phone cusub Android noqon doonaa mid sahlan sida labada telefoonada waxaa socda on Android. Haddii aad jiri doonaa isticmaalaya xisaab isla Google u phone cusub, ka dibna emails aad, xiriirada, iyo jadwalka la isla synced kartaa adiga oo aan dadaal kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo lacag la'aan ah si ay u kala iibsiga, oo ay jirto si ka fiican, taas oo aad ku gadaneyso waxba ka qaban.
Jidka oo bilaash ah - waxa la sameeyo iyadoo aan wax lacag ah dime
Waxaad isticmaali kartaa app lacag la'aan ah sida Samsung Smart Switch u ogolaanaya kala iibsiga xogta u dhexeeya laba qalabka Android fudayd badan qalabka wireless inay kala iibsiga qalabka. Waa sidan sidii aad u bedelan karaa xogta la isticmaalayo biiro Smart.
1. Tag Google Play suuqa iyo soo bixi Switch Smart. Hadda rakibi app iyo furi. Waa in aad ka soo dejisan iyo gashato ku shubtaan taleefanadooda.
2. Haddaba LG, furo app, u gudub content hordhaca oo dhan, oo ay doortaan faylasha aad rabto in lagu wareejiyo, waxaad dooran kartaa fariin, sawirka, music, videos, iyo barnaamijyadooda.
3. Hadda bedesho phone cusub Android. Dooro ikhtiyaarka, oo wuxuu muujin doonaa Android inay "telefoonada aad model magaca". Si loo hubiyo in labada ogaado mid kasta oo kale, iyaga ku hay meel fog wax ka yar 10 cm. U ogolow iyaga in lagu ogaado mid kasta oo kale.
4. Marka ay haatan ku xiran waa wakhtigii la sameeyo kala iibsiga. Just sugi kala iibsiga. Markii ugu xirnaan doontaa tirada faylasha.
Habkani wuxuu isticmaalaa qalab qalab tiknoolajiyadda xawilaadda wireless, oo ka madax bannaan xogta network ama Wi-Fi badan sida Bluetooth. Si kastaba ha ahaatee, waxaad la kulmi kartaa isbedel xogta qaar ka mid ah sida sawirada xiriirada ka maqan yahay ama ringtone heegan ah iwm
Habkani waa u fududahay laakiin waxay leeyihiin ay cillad weyn oo u gaar ah, taas oo ka dhigaysa inaysan ku habboonayn isticmaalka jeer ka badan ee aad taleefan LG.
Samsung horumariyo app this, oo sidaa daraadeed waxa aan la qalabka oo dhan waxaa laga yaabaa shaqeeyaan si fiican u sida ay qalab Samsung shaqeyn doonaan.
Sida wareejinta xogta la sameeyo iyadoo la isticmaalayo qalabka si qalab tiknoolajiyadda aan waayirka lahayn sida Bluetooth, ma aha oo lagu kalsoonaan karo. Tusaale ahaan, ma laga yaabaa in aad xidhiidh la leeyihiin sawirka qofka. Sidaas darteed, waa in aad mar kale waafajinta u qalab cusub.
Haddii size waa ballaadhan yahay, waxa ay qaadan kartaa qaar ka mid ah markii ay u gudbiyaan.
Waxaad haysan doontaa in uu abaabulo xogta cusub ee wareejiyo aad telefoon cusub.
Doorasho wanaagsan: Isticmaalka Wondershare MobileTrans
Waa sida ugu wanaagsan ee suurto gal ah in xogta aad ka LG wareejiyo qalabka android. Software waxaa lagu horumariyaa Wondershare oo ay la khabiir horumarinta software utility sida. software loo helo oo halis lacag la'aan ah. Halkan waxa ku jira qaababka ay:
Waxaad ku wareejin kartaa macluumaadka sida xiriirada, qoraal, sawirro, Cajalado, videos, barnaamijyadooda, abuse call ah iyo qaar badan. waxan oo dhan ayaa loo gudbin karaa mid ka mid click.
Waxaad macluumaadka ka gurmad, computer, telefoonka, iyo xisaabta iCloud wareejin karaan.
Waxa ay taageertaa oo dhan os waaweyn sida Android, daaqadaha, iyo Symbian. Waxaa intaa dheer, waxa ay sidoo kale u shaqeeya telefoonada ka dhan saarayaasha iyo shabakadaha. Waxaa jira arrimo ma waafaqsan yahay waxaa la. Waxaa la og yahay in ay taageeraan in ka badan 3000 telefoonada.
Waxaa la xaqiijistay oo halis software free sida u adeegsanayaa aad PC sida intermediator u dhexeeya labada qalabka.
Transfer waa ka dhaqsi badan tahay sida ay u isticmaalaan banki ku xiran sida USB halkii ay ku xiran tahay waxaad tidhaahdaan, daruur ama xogta adeegyada noqon kartaa waqti iyo aakhirka farabadan oo ah kharashka xogta.
Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa Mobile Trans in ay xogta ka LG wareejiyo qalabka Android
1. Download software ah oo ku xidh on your computer. Fur software ah. Tag, oo furo Phone fursad u Transfer Phone.
2. Hadda labada qalabka aad ku xidhmaan aad pc isticmaalaya USB ah. Sug waxaa in la ogaado telefoonada aad. Hubi in LG xiran yahay sida il iyo kuwa cusub Android sida Destination.
3. Marka ay ku xiran oo kaliya, u tag qaybta dhexe. Dooro content aad rabto in aad ku wareejiso. Hubi in ay saxday.
4. Hadda riix badhanka kaliya Transfer ka. Waxaad arki doonaa a pop cusub ayaa muujinaya xaaladda kala iibsiga faylka.
Marka xogta la wareejiyay, aad ka saarto qalab iyo hubiyo phone cusub ee xogta. Software waa fududahay in la isticmaalo iyo ka dhigaysa boqolkiiba boqol kala iibsiga lagu kalsoonaan karo.
Waa kuwee LG qalabka ayaad isticmaashaa?
Telefoonada LG ayaa macaamiisha u gaar ah oo saldhig u sabab ay curinta iyo naqshadaynta. Waxaa had iyo jeer lagu yaqaan in ay u hormarsataan naqshado cusub. Halkan waxa ku jira 10 telefoonada LG caan ah oo aad ka heli karto ee USA:
2. LG G awooddiisa 3
Stylus 7. LG G3
Awooddiisa ayaa 3 lagu yaqaan keeno telefoonka ugu horeysay qalooca smart dunida ugu soo galay, oo waxaa laga iibsan karaa iyada oo qaar ka mid ah heshiis online wanaagsan maanta, macaashka kharashka yar sida $ 300 back to.
Sidaas oo telefoonka LG ah ayaad isticmaashaa?
> Resource > Android > Sidee Waxaad ka LG wareejinta xogta si ay Android?